Iprofayile kaMiguel Hernández kwi-iPhone eyiyo | IPhone iindaba
Umhleli, u-geek kunye nomthandi we-Apple "inkcubeko". Njengoko uSteve Jobs esithi: "Uyilo ayisiyimbonakalo nje, uyilo lusebenza njani." Ngo-2012 i-iPhone yam yokuqala yawela ezandleni zam kwaye ukusukela ngoko akukho apile iye yandichasa. Ukuhlala sihlalutya, kuvavanya kwaye sibona kwindawo ebalulekileyo yokujonga into i-Apple ekufuneka isinike yona sobabini kwinqanaba lehardware kunye nesoftware. Kude ekubeni ngu-Apple "fanboy" Ndiyathanda ukukuxelela impumelelo, kodwa ndizonwabela ngakumbi iimpazamo. Ifumaneka kwi-Twitter njengo @ miguel_h91 nakwi-Instagram njenge @ MH.Geek.
UMiguel Hernández ubhale amanqaku angama-2942 ukusukela ngoMatshi 2015
22 May I-WhatsApp iya kuyeka ukuxhasa ii-iPhones ezindala
19 May Yiloo ndlela ekulula ngayo ukuvala umxholo wabantu abadala kwi-iPhone kunye ne-iPad yabantwana bakho
15 May Uyifunda njani kwaye uyiphendule njani i-WhatsApp ngaphandle kokuvela kwi-Intanethi
09 May I-intrahistory enomdla kwi-solar sphere ye-Apple Watch
03 May Uyijonga njani ibhetri yeAirTag yakho
02 May Bagqekeza phantse i-3GB yedatha evela kwi-iPhone kaMongameli waseSpain
01 May Sityelele i-Apple Park eCupertino, la ngamava ethu
23 Mar Uyifomatha njani i-iPhone yakho
22 Mar Isiboniso se-Apple Studio sine-64GB yokugcina… ukwenzela ntoni?
22 Mar Yile ndlela ukuvuselela i-5G ekuchaphazela ngayo ibhetri ye-iPhone yakho
18 Mar I-Apple Studio Display ayifani nexabiso layo
14 Mar I-Apple ikhupha i-iOS 15.4 kunye ne-iPadOS 15.4, ezi ziindaba zonke
14 Mar Ngaba uyazazi ezi zinto zinomdla kwi-Apple Studio Display?
08 Mar I-iPhone SE (2022) Yeyiphi i-iPhone exabiso eliphantsi embalini?
06 Mar Yonke into iApple iya kuyibonisa kumsitho wayo wePeek Performance
UJan 30 I-WhatsApp ikhomba kwisicelo esisemthethweni se-iPad
UJan 24 Ngaba i-Apple Watch yakho isebenza kancinane? Yilungise ngala maqhinga
UJan 20 Ultimate Guide ukuba Apple College izaphulelo
UJan 18 I-iPhone SE entsha ifika kunye ne-iPad Air ngokokuvuza kwamva nje
UJan 18 Usifaka njani isatifikethi sakho sedijithali kwi-Mac kunye ne-iPhone